SPIEL'21 inopemberera kutanga kutsva: kutengeserana kuratidza kunoratidza mafambiro emwaka - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo.
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Oct 13, 2021 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, GAME muEssen, Events
Iyo SPIEL'21 muEssen yave kuda kutanga zvakare: Mushure mekuzorora kwakabatana nekorona kusanganisira rwendo rwekuenda kuInternet, chiitiko chikuru chepasirese chemitambo yebhodhi chiri kudzoka kunzvimbo yekuratidzira yeEssen. Iine yakakwenenzverwa hutsanana pfungwa, yakawedzera nzvimbo uye chengetedzo mirau inosanganisira zvinodzora. Chinhu chimwe chete hachina kushanduka: huwandu hwehunyanzvi hwakakura, kunyangwe husiri hwakakura semunguva denda risati rasvika. Gore rino tarisiro ichave pane chimwe chinhu chakasiyana zvachose zvakadaro: mufaro wekuti International Game Days inogona kuitika panzvimbo zvakare.
Pachiratidziro chitsva, vaparidzi vakapinda vakaratidza mitambo yavo yebhodhi kubva mumwaka wazvino, uye izvo hazvina kuchinja gore rino zvakare. Zvinoita sekunge iyo SPIEL'21 inonyanya mutambo wevanoziva uye vanogarotamba - pane zvakawanda zvitsva zvevanyanzvi pakati pevatambi vebhodhi mutambo uyu wekuvhuvhuta - zvekuti munhu anogona kutaura nezve preponderance yemitambo yakaoma yebhodhi. Vana nevatambi vemhuri vachawana yakawanda sarudzo.
SPIEL'21: Kufarira kutsva kwemitambo yebhodhi
Denda rekorona rachinja zvakanyanya uye rakasanganiswa zvakanyanya mumwedzi mishoma yapfuura. Indasitiri yemitambo haina kuregererwa kana: kunonoka, mabhodhoro ekutakura, kuwedzera mari - vaparidzi vakatarisana nematambudziko. Zviri pachena kuti vakakunda matambudziko. Musika wacho wakakura zvakare muzvikamu zviviri. Chimiro pakati pevaparidzi nevanyori? Zvizhinji zvakanaka. Pano neapo mazuva ekuburitswa akadzoserwa kumashure, mimwe mitambo yakasvika kune vabudisi nguva pfupi isati yatanga yekutengeserana fair, uye kune vamwe vavo makopi ekuedzwa aripo. Pane imwe nzira yekuita zvinhu zvakanaka.
Chero zvazvingava, vaparidzi havana kuita kuti sarudzo yekutora chikamu kana kuti yekupikisa zvive nyore kwavari. Mune zvimwe zviitiko, kwakanga kwakaoma, asi vaparidzi, savashandirwi, vanonangana nedenho yakati. Chero zvazvingaitika, kudedera hakuna kukonzeresa kudzima kwekutanga kwaAsmodee, vazhinji vanozivikanwa zviso zviripo, asi vakaisa mitemo: Iwe haugone kutamba musango kwese kwese, asi kune nzvimbo dzakakwana dzekuyedza zvigadzirwa zvitsva, kana kuti zvinounzwa. MuHoro 1 kusvika 3 uye 5 mune bhodhi nemakadhi mitambo, muHoro 6-yekutamba mitambo nemakomiki. Uye iyo Galeria zvakare yakagarwa zvakare.
Kune misoro mizhinji, kusanganisira yakakomba: kusimba muindasitiri, kuenzana, mafambiro ezvakaitika kare - mapotifolio evabudisi haana kurasikirwa nekureruka kwavo kunofadza. Pachine pfungwa dzakapusa, dzakapusa, uye dzisingadaviriki. Uye zvichida vachadiwa kupfuura kare. Iyo SPIEL iri, sekudanwa kwayakaitwa naYoutuber Pottgamer: "Kupukunyuka zvishoma kubva muupenyu hwezuva nezuva".
Vamwe vatambi vanobva muchikamu chemitambo yevana neyemhuri vachiri kurasikirwa zvakanyanya nekuti vakaita SPIEL chiitiko cheese mazera. HABA, semuenzaniso, kana Zoch. Mazuva emitambo yepasi rose muEssen acharamba ari chiitiko chemunhu wese gore rino - kubva mudiki kusvika mukuru uye mudiki kusvika mukuru. Ruzivo rwakawanda pamitengo yekubvumidzwa, sarudzo dzekuyedza uye mirairo yehutsanana inowanikwa online pa: www.spiel-messe.com -Yazvino GAME gwara rinogonawo kutorwa ipapo.
Pakupedzisira, mufaro unodarika mukana wakachena wekutangazve. Iyo SPIEL munzvimbo yedhijitari yaive uye ndiyo imwe nzira, kwete yekutsiva. Mitambo yebhodhi nemakadhi inogara kubva kune yavo haptic maratidziro - uye nekuda kweiyo-saiti fair vanogonawo kuzviratidza zvinoenderana. Zvinopfuura chiuru zvigadzirwa zvitsva zvinogona kuonekwa paSPIEL'1.000, inoratidzwa nevanenge mazana matanhatu evaratidzi vanobva kunyika makumi mana neimwe. Kunyangwe pasi pemamiriro ezvinhu eCorona, mazuva emitambo yepasirese anoramba ari chiitiko chikuru kune vateveri vane chirongwa chekutsigira chine ruvara. Dai asiri emasks, ma disinfectant dispensers, zviratidzo - Corona yaisanzwika. Zvishoma nezvishoma. Mumwe anoona kusava nechokwadi kwevamwe vatambi: Kutaura nevasingazivi wakasununguka? Mumwe anozeza. Hurukuro refu? Ivo varipo zvakare, kunyangwe zvine ruzha, nekuti masiki anoita seanomedza mazwi mazhinji.
Vanosvika zviuru makumi matatu vashanyi vanofamba-famba mumahoro mazuva ese, zvinoita senge nhamba huru mushure menguva refu yekurambidzwa. Pamberi peCorona, vanopfuura zviuru mazana maviri vashanyi vakauya kuEssen pamazuva mana eiyo fairi - yakapetwa kaviri izvo zvinogoneka izvozvi. Zvakangodaro: zviuru makumi matatu nhandare yenhabvu izere nhabvu yepakati-kirasi kirabhu uye zviuru makumi matatu zvakanyanya kupfuura "vanhu vashanu vanobva kudzimba mbiri" - ndiwo matambiro aitambwa panguva yedenda mumabasa akarambidzwa ”.
Iye zvino nyanzvi, vamiririri vezvematongerwo enyika uye varongi vari kurega vanhu kubva mumaketani zvakare - uye chinhu chimwe chakajeka: Vachatora mukana uye vanogamuchira nekuonga. Zvinhu zvose zvichashanda sezvazvinofanira here pakupedzisira? Mhedziso inotevera mushure meSPIEL'21. Ikozvino angangoita mazuva mana ekunakidzwa kwebhodhi mune yakamutsiridzwa yemitambo capital yeEssen: ine shanduko zhinji, asi izere nechido.
Mufananidzo gallery ye SPIEL'21 novelty show:
[foogallery id = "31975 ″]
Asmodee | Mighty Boards | Excavation Earth | Basic game |... * 43,99 EUR tenga
Kare SPIEL'21 muEssen: "Kutiza kudiki kubva kuhupenyu hwemazuva ese"
Inotevera "International Games Invention Fair" inouya kuNuremberg
Crowdfunding: Yazvino mitambo yebhodhi paKickstarter (3th svondo 2021)
Everspace 2: Zvitsva zvemukati zvakaziviswa zve2022
E3 imwe nzira "Tsvaga Mutambo Wako Unotevera" inotambirwa zvakanaka: Mamirioni evateveri vanoteerera